Fifanakalozana ara-kolontsaina : Mivahiny any La Réunion mandritra ny roa herinandro ny Malagasy Gospel -
AccueilVaovao SamihafaFifanakalozana ara-kolontsaina : Mivahiny any La Réunion mandritra ny roa herinandro ny Malagasy Gospel
04/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Antoko mpihira avy amin’ireo fianakaviana sahirana any Toliara. Ao anatin’ny hetsika fifanakalozana ara-kolontsaina, dia mivahiny any amin’ny Nosy La Réunion mandritra ny roa herinandro ireo mpikambana ao amin’ny Malagasy Gospel. Antoko mpihira ahitana mpikambana tovovavy 14 miaraka amin’ilay tovolahy mpihira fototra Harris, izay avy amin’ny fianakaviana sahirana nefa novolavolain’ilay tetikasa fanabeazana sy ara-tsosialy ONG Bel Avenir.
Tafiditra amin’ny hetsika fankalazana ny faha-15 taonan’io fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana miasa any Atsimon’ny Nosy io fifanakalozana io. Ny fikambanana Eau de Coco no miantsoroka ny fandraisana sy ny fampiantranoana azy ireo, ary koa manara-dia amin’ny fikarakarana ireo seho samihafa ataon’izy ireo.
Nanomboka ny 31 marsa lasa teo ny fampisehoana ataon’ny Malagasy Gospel, ary tsy hifarana raha tsy ny 7 avrily izao. Misy ireo antoko mpihira miangaly ny gadona Gospel miara-dia amin’izy ireo amin’ny fampisehoana ataony amin’ireo toerana andalovany. Saika amin’ny fiangonana no hanatanterahana ny ankamaroan’ny seho. Misy ihany anefa ireo atao amin’ny toerana lehibe kokoa. Tanjon’ny fikambanana Eau de Coco ny hisian’ny fisokafana sy fifandraisana ho an’ireto ankizy ireto amin’ny kolontsaina hafa.
Tsiahivina fa tao anatin’izay 15 taona izay, dia efa nitety firenena maro nitondra ny gadona Gospel araka ny fiangalian’ny Malagasy azy ireto mpikambana ireto.
Andriamorasata Solo Norbert,28 « Vaindohan-draharaha ny toe-karena sy ny fandriam-pahalemana” Efatra andro lasa izay no nanombohan’ny fampielezan-kevitra. Samy manana ny fomba hitondrany izany ny kandidà tsirairay avy. Ho an’ny kandidà Andriamorasata Solo Norbert, avy ao ...Tohiny